Semalt: Ahoana ny fomba hanakanana ireo habaka? - Top Tips
Fitaovana fampiasan'ny mpiserasera data avy amin'ny tranonkala iray. Fantatra amin'ny maro toy ny fananganana ny tranonkala, ny fanalana ny tranonkala dia mandefa ny famoahana ny angon-drakitra sy ny votoaty avy amin'ny pejy tsirairay na ny tranokala manontolo. Ity teknika ity dia ampiasain'ny mpitoraka blaogy, tompon'ny tranonkala, ary ny mpanolo-tsaina amin'ny varotra mba hamoronana sy hamonjena ireo votoaty ho amin'ny protocols mibaribary.
Ny votoatin'ny fanontana
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny angona avy amin'ny tranonkala dia matetika amin'ny endrika sary na HTML. Ny fampidirana ny pejin-tranonkala amin'ny fomba maro dia fomba fanao matetika ampiasaina hamongorana sary sy lahatsoratra avy amin'ny tranokala iray. Ny webmasters dia maniry amin'ny navigateur mandidy mba hamonjena pejy amin'ny tranokala scrappe amin'ny alalan'ny baikon'ny baiko. Azonao atao koa ny mamoaka ny angona avy amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny kopia-fametahana ao amin'ny tonian-dahatsoratrao.
Fampiasana programa fandinganana tranokala
Raha toa ianao ka miasa amin'ny famoahana angona betsaka avy amin'ny tranokala iray dia eritrereto ny famoahana rindrambaiko ho an'ny tranonkala. Ny rindrambaiko amin'ny tranokala web dia miasa amin'ny fandefasana rakitra betsaka avy amin'ny tranokala. Ny rindrambaiko koa dia mamonjy ireo angon-drakitra voatahiry amin'ny endrika sy ny protocols izay mora vakiana amin'ny mpitsidika mety.
Ho an'ny webmasters miasa amin'ny famoahana angona avy amin'ny tranokalam-potoana amin'ny fotoana tsy tapaka, ny bots ary ny sponjy no fitaovana tsara indrindra ampiasaina. Ny bots dia mamoaka angon-drakitra avy amin'ny tranokala feno habibiana ary mamonjy ny fampahalalana ao amin'ny datasheets.
Fa maninona ny angon-drakitra?
Ny fampiasana tranonkala dia fomba iray ampiasaina amin'ny tanjona samihafa. Ny fampiroboroboana ny fampiasana ny endriny dia tena manan-danja.
Ny sasany amin'ireo webmasters sy mpitoraka blaogy dia mamoaka angona ao amin'ny ordinaterany mba hijerena azy avy eo.
Amin'ny maha-mpandrindra web-ko, mila manamarina ny rohy sy sary ao anaty tranonkalanao ianao amin'ny maha web developer anao. Noho izany antony izany, ireo mpandrindra web dia manaparitaka ny tranonkalany mba hitsapana ny sary, ny votoatiny ary ny rohy mankany amin'ny pejin'ireo tranonkala. Izany dia afaka manampy haingana ireo sary ary manavao ireo rohy tapaka ao amin'ny vohikalany.
Google ha fomba iray ahafantarana ny votoaty navoaka. Ny votoatin'ny fanontana an-tsoratra amin'ny tranonkalan'ny fako mba hamoahana azy ao amin'ny tranokalanao dia tsy ara-dalàna ary mety hitarika amin'ny fanakatonana ny tranonkalanao. Ny famoahana ny votoaty amin'ny marika famantarana hafa dia heverina ho fanitsakitsahana ny fepetra sy ny torolàlana mifehy ny tranonkala.
Ny fanitsakitsahana ny teny dia mety hitarika ho amin'ny fanenjehana ireo mpitoraka blaogy, webmasters, ary mpivarotra. Alohan'ny famoahana sy ny fanalàna ny votoatiny sy ny sary avy amin'ny tranonkala, dia tsara ny mamaky sy manazava ny fehezin'ny tranonkala mba hisorohana ny tsy fanasaziana sy ny fanenjehana ara-dalàna.
Ny famafazam-borona amin'ny tranonkala na tranonkala dia fitaovana iray ampiasain'ny mpividy mba hanangonana angona betsaka avy amin'ny tranokala. Ny fanarabiana dia mitarika ny tranokala na tranonkala manokana. Amin'izao fotoana izao, ny tranonkalan'ny tranonkala dia nampiasain'ny mpikaroka tranonkala mba hitsapana rohy tapaka ao amin'ny tranokalany Source .